क्रमभंगको भय - परिहास - नेपाल
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न खप्पिस छन् । उनले एमालेसँगको चुनावी तालमेल घोषणासभामा भनेछन्, ‘फेरि निरन्तरतामा क्रमभंग गरेको छु ।’ प्रचण्डका क्रमभंग गनी नसक्नु छन् । कहिले जनवाद ल्याउन राजा र राजनीतिक दलसँग युद्ध, कहिले राजनीतिक दललाई सिध्याउन राजासँग मिल्ने प्रस्ताव, कहिले भारतमा बसेर भारतकै विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा । अन्तिममा चाहिँ नयाँ दिल्लीमा दलहरुसँग १२ बुँदे समझदारी र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण । प्रचण्डका यी सबै क्रमभंगमा १ सय ८० डिग्रीका अन्तर छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि एमालेसँग क्रमभंग गरेर शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि अहिले देउवासँग क्रमभंग गरेर केपी ओलीसँग पुन: क्रम मिलाउँदै छन्् । एमालेसँग ६०–४० को क्रमभंगमा कांग्रेसले भोलि ५०–५० को प्रस्ताव गर्‍यो भने के गर्लान् ? फेरि एमालेसँग क्रमभंग गर्न बेर छैन । जुवाडेलाई चिन्ता छ, कतै क्रमभंगको भार थेग्न नसकेर प्रचण्ड र उनको पार्टी नै भंग त हुने होइन ?
बाघ दिवसमा बाघ
बंगलादेश किन जानुपर्‍यो ?
अब कांग्रेस सिद्धियो
आयो टप्प टिप्यो...